Ifulethi enethafa phakathi kwehlathi
Yindlu enemigangatho emibini ekhethekileyo, ehonjiswe ngesitayile saseScandinavia, kolona ncedo lukhulu lweendwendwe eziza kuthi ngeholide ngaselwandle. Kumgangatho ophantsi wendlu engaselwandle yaseBosque kukho indawo yokuhlala enekona apho abantu ababini banokulala khona
ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elitofotofo kunye nebalcony enelanga. Kutheni iBosque - kuba igumbi elinebalcony, likhululekile, libanzi kwaye liyingqayizivele ngokwenene libhongo lethu.
Indawo esondeleleneyo, entle ngaselwandle. Indlela yabucala ikhokelela ngqo kwiilwandle. Ecaleni kwesakhiwo sokuhlala kukho ichibi kunye nendlela yebhayisekile enokukusa eMrzeżyno naseKołobrzeg. I-Baltica Heaven inendawo yokuqubha yangaphandle enepuli yabantwana, ijim, ibala lokudlala kunye nebala lebhola yevoli elwandle.
Isikhungo sonke sijikelezwe lihlathi, eliqinisekisa uxolo noxolo, kwaye yindawo efanelekileyo yokuhamba kunye neentlobo ezahlukeneyo zemisebenzi yomzimba.
Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba ngokuchasene noLwandle lwaseBaltic, kwindawo ekufutshane neendawo zokuhlala, kukho i-Resko Przymorskie lake. Kukho nendlela yebhayisekile ekhoyo kwiindwendwe ezisebenza ngokomzimba, ekuvumela ukuba ufikelele ngokukhawuleza kwaye ufikelele eMrzeżyno naseKołobrzeg. Indawo yaseBaltica Heaven eRogowo ibonelela ngepuli yokuqubha yangaphandle enepuli yokubhexa yabantwana. Kukwakho nejimu, ibala lokudlala kunye nebala lebhola yevoli elunxwemeni. Ihlathi elimangalisayo lijikeleze ipropathi, likuvumela ukuba uthathe ithuba lokuzola, hamba uhambo lokuthandana, ukukhwela ibhayisekile okanye ukubaleka.
Ndineqela lam elikhoyo, andifumaneki emntwini kodwa iqela lam lihlala likhona.